छत दीपक स्थापना घर प्रकाश को संगठन मा सबै भन्दा लोकप्रिय समाधान छ। निस्सन्देह, आधार अन्य विन्यास सम्भव छ विशेष परिसर को आवश्यकताहरु मा, तर प्रणाली को कोर रूपमा झन् सिर्फ एक यस्तो योजना प्रयोग भइरहेको छ। गरमागरम र हलोजन संग - प्रकाश स्थापना को शास्त्रीय विधि को बोध संग सामान्यतया सम्बद्ध सामान्य उपकरणहरू छ। तर, कम लोकप्रिय र प्रकाश डायोड एलईडी प्रौद्योगिकी को सबै लाभ जोडती जो छत। शक्ति बचत, यांत्रिक तनाव उच्च चमकीले दक्षता र स्थायित्व ध्यान दिनुहोस् यसलाई Suffice।
अपरेटिङ मापदण्डहरू के विचार?
पहिलो शक्ति-अनुमानित। यो कक्ष सेवा को एक विशेष क्षेत्र को लागि पर्याप्त डायोड को प्रदर्शन कि निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। जीवित कोठा लागि, उदाहरणका लागि, तपाईं संग 15-25 वाट शक्ति दर्जा उपकरण चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चमकीले प्रवाह मापदण्डहरू निर्धारण हुन्छ। यो विशेषता lumens मा व्यक्त र चमक बीम को राशि झल्काउँछ छ। मानक रूप, छत प्रकाश डायोड को 2000-2300 lumens प्रदान गर्दछ। यो मूल्य एलईडी प्रौद्योगिकी आधारित साधन को तागत को छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि हल्का को तापमान ध्यान भन्दा हुनेछैन। एक परिचालन standpoint देखि, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक पनि बिना उपकरणको विकल्प एक गहन दृष्टिकोण मा के गर्न सक्दैन, तर। घरेलु मोडेल सामान्यतया दायरा 3000-5000 K. भएको चिसो को डायोड, को paler आफ्नो प्रकाश मा एक तापमान छ।
छत माउन्ट विधि सुरुमा जुडनार केही संरचनात्मक सुविधाहरू गराउँछ, तर यो मामला मा त्यहाँ विकल्प लागि कोठा छ। चयन, उदाहरणका लागि, डायोड को फारम कारक छत दीपक गठन गरिएको छ जसमा अर्डर भर पर्न सक्छ। आज recessed आवास प्याच डिजाइन धेरै लाभ छ कि संग competes। पहिलो विकल्प स्टाइलिश बिन्दु यन्त्रहरू को एक लोकप्रिय श्रेणी को भाग हो। यस्तो मोडेल, सघन, अत्यधिक दिशात्मक प्रकाश र आकर्षक दृश्य हुन्। को सजावटी मनोवृत्ति मा सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ।
उपरि मोडेल सामान्यतया थप विशाल शरीर, तदनुसार, छ र उच्च क्षमता छ। तपाईं धेरै उदाहरणहरू चलाउन मात्र उच्च गुणवत्ता प्रकाश स्थापित मोडेल हासिल गर्न सकिन्छ भने, घर को लागि डायोड दीपक छत बिल र पूरै Singular ठूलो बैठक कोठा वा बेडरूम सेवा गर्न सक्षम छ।
कार्यालय लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प
यस्तो मोडेल लागि विश्वसनीयता र सान्त्वना को महत्वपूर्ण संकेतक, संसारको आँखा मार्फत धारणा सर्तहरू छन्। सामान्यतया, प्रकाश को कार्यालय मा डिजाइन गरिएको छ, पूर्ण काम दिन भन्दा सञ्चालन गर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। फलस्वरूप, उपयुक्त हुन काम साधन। र यो डायोड स्रोतहरू को तागत को एक पनि छ - यो मामला मा परिचालन अवधि घण्टा दसौं हजार हुन सक्छ। सान्त्वनाका धारणा लागि, यो एक छत दीपक डायोड संग सुसज्जित छ जो लेन्स, ध्यान सुरुमा आवश्यक छ। यस यन्त्रको कार्यालय संस्करण कर्मचारीहरु आँखा लागि उपयोगी छ जो प्रकाश, को चमक softens कि सुरक्षा ग्लास, डिजाइन प्रदान गर्दछ। केही मोडेल, reflectors प्रदान गर्दछ, तर तिनीहरूले त्यागेर गर्नुपर्छ यसलाई पुरानो र अदक्ष समाधान छ किनभने।
औद्योगिक मोडेल को चयन को nuances
को विकिरण कर्मियों को धारणा को मामला मा दीपक को विशेषताहरु मा कार्यालय मोडेल थप जोड, को मामला मा भने, औद्योगिक उपकरण स्थायित्व, प्रदर्शन र स्थिरता को प्रतीक्षा संग रोजेको हुनुपर्छ। पहिलो, हामी प्रकाश को स्रोतहरु को भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित र स्थिर अवधारणा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ कि विशाल संरचना ध्यान गर्नुपर्छ। यो पनि यन्त्र चिसो सुरक्षा डायोड मा उपस्थित छ भने राम्रो हुनेछ। सामान्यतया, औद्योगिक छत luminaire डायोड को इन्सुलेट कोटिंग, तात्दै देखि सुरक्षा प्रणाली, र यति मा। डी प्रदर्शन सादर, विभिन्न तरीकाहरु हुन सक्छ जो बीच सुरक्षा पूरक, एक विस्तृत आवेदन छ। एक हात मा, उच्च शक्ति ठूलो कोठा लागि मोडेल छनौट लागि जरूरी छ। अर्कोतर्फ, यस्तो तत्व को एक ठूलो संख्या बिजुली स्तर शक्ति अनुरूप उपभोग गर्नेछ।
कम्पनीहरु कसरी रुचि?
बजार मा प्रकाश नेतृत्व-उपकरण भेटी कम्पनीहरु धेरै प्रतिनिधित्व। हामी सबै भन्दा राम्रो गुणवत्ता उत्पादनहरु कुरा भने, त्यसपछि ब्रान्ड सैमसंग, फिलिप्स र OSRAM को आगे आउँछन्। तपाईं बजेट को एक छत दीपक डायोड श्रृंखला आवश्यक छ भने, हामी नेभिगेटर मोडेल ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। लागत, 200 300 गर्न rubles देखि संस्करण को प्रारम्भिक स्तर लागि जाँदा।, अनि त्यसपछि पट्टा अप धेरै हजार वा बढी जाने गर्न सक्नुहुन्छ। मान एल ई डी को तत्काल विशेषताहरु, एक विशेष ब्रान्ड र निर्माण जटिलता को मामला स्वामित्वको असर गर्छ, र पाठ्यक्रम।
म नेतृत्व-दीपक, त्यहाँ आफ्नो व्यापक प्रयोग गर्न नेतृत्व जो धेरै आकर्षक पक्षहरू छन्। लाभ उच्च धीरज कम बिजुली खपत र आवास को सौंदर्य उपस्थिति समावेश गर्नुहोस्। यस सन्दर्भमा, डायोड दीपक छत सबैभन्दा सफल embodiment नेतृत्व-अवधारणा रूपमा मानिन्छ गर्न सकिन्छ। विशेष गरी एक कम्प्याक्ट आकार उपकरणहरू सम्मिलित र आकार लाभप्रद छ आधुनिक घर र भवन मा चिटिक्क हेर्न। यो खण्ड र अन्य क्षेत्रमा प्रयोगको लागि एक सभ्य प्रस्ताव छ। विशेष क्षमता र यस्तो दीपक को बल, औद्योगिक र कार्यालय भवन मा स्थापना को लागि पर्याप्त। उपकरणको प्राविधिक विशेषताहरु संग स्थापना साइटको लागि परिचालन आवश्यकताहरू मेल गर्ने अधिकार - मुख्य कुरा।
"भेक्टर" (तातो पानीको मूल), उद्देश्य र सञ्चालनको सिद्धान्त
पम्प "साना केटा" - ठूलो व्यापार को लागि सानो सहायक
एकल-चरण मीटर कसरी जडान गर्न: सुझाव र नियमहरू
फावडा - छत मा छ ... Aerators
Atlantica Stavrolia गार्डन3- Ayia नापा मा बजेट होटल
को फोम ब्लक को प्लास्टर पर्खालहरु लागि समाधान कसरी लागू गर्ने?
बालिका लागि शरद ऋतु overalls - खराब मौसम मा विश्वसनीय सुरक्षा
को बालकनी मा पर्दे कसरी चयन गर्ने?
Prams Zippy: समीक्षा र प्रकार
एक psychopath कसरी चिन्न? तीन लुकेका सुविधा
पत्रकार Elena Tregubova: जीवनी र काम
"सफारी पार्क" (जेलेन्ड्झिक): जीवनमा कैदी राम्रो छ